Saba tokko Ajjeesuun Dura Afaan isaati Ajjeesu, Kanaaf Guddina saba keenyaatiif Afaan Keenya Guddisuun Gahee Guddaa Qaba. – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosSaba tokko Ajjeesuun Dura Afaan isaati Ajjeesu, Kanaaf Guddina saba keenyaatiif Afaan Keenya Guddisuun Gahee Guddaa Qaba.
Afaan Oromoo Guddisuun Saba keenya Guddisuudha
Kana fa’aa bakka qubee nuuf buusuuf yaalu of tuultonni 😉
“Sa’a abbaan gaafa cabse ormii ija baasa” jedha Oromoon
Yoo sirbite sirbii akka mucaa isa xiqqichaa…
Baran barataa cimaa turee dabtarii badhaafamu sana.
Gaafa sana sagantaan amaarrinyaa na raffisa ture😀
Yeroo sana ayin affaar isa jedhamu sanan tureem😀
Share Goodha Daaraan afaan baasee “ani muka” jedheef, ‘eeyyee ati muka’ jechuu hindandeenyu!
Barruu kana dursee sheekkoo tokko isin biraan gaha. Adurreetu Daawwitii keessatti of ilaala ture. Daawwitiin sun fuula ishee qofa agarsiisa. Sana booda daawwitii keessatti isa argite Leenca ofitti fakkatte. “Ani Leenca” jettees bokokte. Akkuma Daawwitii keessatti of argitee kaatee “ani Leenca ta’ee Hantuuta hinyaadhu!” Jettee murteessite. Kanaan booda manaa bahuun qaba jettee adamoof qajeelti. Utuu adamseen nyaadha jettee adeemtuu Adalli itti dhufee lolee ajjeesa.
Maaliifin sheekkoo olii kaase beektaa? Yeroo hedduu uummata keenya gaaddiidduu dabalatee uffata Suufii inni uffatuuf miidiyaa gowwomsa. Warreen har’a “nuti #ABO dha” jedhan yakkamoo qabsoo bilisummaa keessatti yakka ajjeechaa dabalatee qabsoo gufachiisuu keessatti gahee qaban ta’anii miidiyaan isaan gowwomse. Gaafa isaan “nuti ABO dha” jedhanii shaanxaa isaanii haharkisa miidiyaatu eeyyee isin #ABO dha jedhee isaan gowwomse. Miidiyaa ilaalanii akkuma Adurree daawwitii ilaaltee of gaagurtee of gaaguruuf imala jalqabaniiru. Dhumni namoota Copy paste ABO kanaa maal ta’a? Kan jedhuuf walumaan kan ilaallu ta’uu jira.
Waan guddaan naa galuu didu garuu; nuti ABO dha jechaa barjaa OPDO naanneessaa utuu oolanii agarra. Kun waan qaanfachiisaa fi kofalchiisaadhas. OPDO ABO ta’ee isaniif ABO OPDO ta’uu isaanii waan beeknu jiraatuu baatus “nuti paartii mormituu ABO” ofiin jechaa, OPDO filadhaa waan jedhanis fakkaatu. Erga OPDO filadhaa nuun jedhanii maqaa isaanii OPDO tti jijjiiruu qabu turan. Burjaajessinee uummata kana garbummaa keessatti hanbifna jeedhanii yaadu yoo ta’e ofumaa badu malee uummatni guyyaa inni dammaqu fagoo miti.
Daaraan afaan baasee “ani muka” jedheef, ‘eeyyee ati muka’ jechuu hindandeenyu! Jedheen eegale. Eeyyee, daaraan daaraadha. Erga daaraa ta’ee booda qilleensa jala dhaabbachuus ta’ee jajjaboo ta’een akka kiyya duraatti itti fufa jechuu hindanda’u. Akka gaafa mukaa ture sanaas “mukaa” gaafa jedhanii waaman awwaachuu hindanda’u. Maaliifree? Ulaagaa mukaa keessaa of baaseera, ulaagaa mukti tokko muka ittiin jedhamu keessaa erga bahee “ani muka” jechuuf haamilees ta’e yeroo qabaatuu hinqabu. Kaleessa muka waan tureef an har’a muka jedhuyyuu daaraan daaraadha malee daaraan muka miti
Qaamoleen har’a “ani ABO dha” jedhan, ofii isaaniif an ABO dha yoo jedhan illee, ulaagaa ABO guutuu qabu. Ulaagaa ABO guutuu hindanda’an taanaan akkuma Daaraa sana malee kaleessa waan ABO ta’aniif har’a ABO ta’uu hindandaa’an. Waan guddaan maanguddoota akka daa’imaatti yaadan kana gowwomse inni olaanaan miidiyaadha. Miidiyaatu isaan sobe, miidiyaatu isinis ABO dha jedhee akkuma Adurree Daawwiteen gowwomsee isaan gowwomse.
Gantuu fi ayyaan ilaallattuun kaayyoof ejjennoo ABO gatanii erga ya’anii ABO ta’uu hindandaa’an. ABO maqaan utuu hintaane hojiidhaan beekna, Oromoonis hojiidhaan nu beeka. ABO ta’uukoo anatu dubbatatee mirkaneessa utuu hintaane hojii kiyyatu ABO ta’uukoo lallaba. ABO Kayyoodha, kaayyoon kan sabaati. Sabichis nu Oromoodha. Warreen har’a akka mi’a China copy ta’anii OPDO dhaan dhalatan herrega kamiinuu ABO ta’uu hindandaa’an. Yoo nuti ABO dha jedhan akkuma mi’a china sana lafa isaan itti dhabamantu, lafa isaan itti addaan dhilamantu jira. China Kophee dabalatee meeshaa hedduu Branda fakkeessitee oomishti. Mi’i China sun garuu akka isa qulqulluu/orjinaala sanaa umuriis ta’e hojiin isaa hinargamu. Dafee dhumuu fi caccabuudhaa beekama. Mi’a China fakkeessanii ABO galagalchuun/copy taasisuun daangaa akka godhatun dhaama.
#Afaan_Oromoo Tuttuquun Ibiddaan Taphachuudha!
Oromoon Jaarraa tokkoof walakkaa qabsoo hadhaawaa aarsaa lubbuu kumaatamaa itti kaffale kan geggeesse Oromummaa isaa guddisuu fii mullisuufi. Afaan Oromoo Mallattoo Oromummaa isa guddaa fii ijoodha. Kanaaf Kaayyoon ijoon qabsoo Oromoo Afaan Oromoo guddisuu fii sadarkaa addunyaatti beekkamtii argatee Oromoo fii Oromummaa addunyaatti mullisuudha. Yeroo Oromoon Afaan isaa sadarkaa yunivarsiitiitti ol guddatee afaan barnoota dhaabbilee barnoota ol’aanoo akka tahuuf harka addarra kaayyatee eeggachaa jirutti afaan kana gara duubaatti deebisanii xiqqeessuuf cubbuu tabba gahu kana irratti raawwachuuf yaaluun tuffii qaamni gocha kana geggeesse saba oromootiif qabu kan argisiisu. Kaleessi har’aa miti. Har’a cubbuun oromoo irratti aggaamamu kamiyyuu gonkuma hin milkaayu. Dhaloonni oromoo inni kaleessaa fii inni har’aa garagara. Har’a dhaloonni morma gadi qabee cubbuu irratti xaxamu amiin jedhee fudhatu hin jiru. Warri kana yaaddan abiddaan taphachaa jirtan. Jarraan jaarraa 21ffaati. Qaamni shira akkasii Oromoo fii Afaan Oromoo irratti xaxxan, Ofii jedhaa gocha isin balleessu raawwachuu irraa of-qusadhaa jenna.
Dr. Abiy Ahmad